तरकारी ओट दुध | ThermoRecines
पेय14 मिनेट१ लिटर मानिस100२ क्यालोरी
La जईको दुध एक फरक छ तरकारी दुध त्यो घरमा बनाउन सकिन्छ र यसका सबै सुविधाहरूको आनन्द लिनुहोस्। सबै भन्दा राम्रो ज्ञात हो Horchata र सोया दुध, तर त्यहाँ अन्य विकल्पहरू छन्, जस्तै अनाज वा सुक्खा फल दुध। ती मध्ये, यो दलिया पेय, जुन चिन्ता र लड्नका लागि उपयुक्त छ तनाव, दिगो-स्थायी र फ्याट-मुक्त ऊर्जा प्रदान गर्दछ। यो बी भिटामिनमा समृद्ध छ, स्नायु प्रणालीको लागि लाभदायक, र शान्त प्रभावको साथ एल्किन, एक एल्कालोइड समावेश गर्दछ। यो व्यक्ति वा महान गतिविधि को क्षणहरूको लागि उपयुक्त छ र मानसिक एकाग्रता को लागी आवश्यक छ।
थप रूपमा, यसले कम गर्न मद्दत गर्दछ कोलेस्ट्रल र यो पचाउन सजिलो छ। विशेष गरी उपयुक्त ल्याक्टोज असहिष्णु वा गाई प्रोटिनमा एलर्जी
1 ओट दुध
तनावसँग लड्न र ऊर्जा आपूर्तिको लागि आदर्श, यो तरकारी ओट दुध बिहानको खाजामा उत्कृष्ट विकल्प हो, विशेष गरी ल्याक्टोज पचाउन नसक्ने अवस्थामा।
सेवाहरू: १ लिटर
दालचिनीको १ स्टिक
ओट फ्लेक्स, नुन र दालचीनी स्टिक गिलासमा राख्नुहोस्। हामी समयमा कुचल्छौं Seconds सेकेन्डको गतिमा। हामी बाहिर निकाल्छौं र रिजर्भ गर्दछौं।
हामी पानीलाई परिचय दिन्छौं र यसलाई तातो पार्दछौं Minutes मिनेट, १००º, गति १।
आरक्षित मिश्रण थप्नुहोस् र सबै समयमा ब्लेन्ड गर्नुहोस् Speed ​​मिनेट वेगमा।
यसलाई शीशामा आराम गर्न दिनुहोस्, छोपिएको र बीकरसहित, minutes मिनेटको लागि।
स्ट्रेनरमा हामी ठूला धुलाइ वा पातलो कपडा राख्छौं र दुधलाई तानिन्छ। जब तरलले फिल्टरिंग सकिसकेपछि, हामी बाँकी द्रव्यलाई गज वा कपडाले लपेट्छौं र सबै पेय झिक्न समाप्त गर्नका लागि थिच्दछौं।
र यो तयार छ। अब हामी यसलाई चिसो पार्नेछौं र लिने घडीमा हामी यसलाई स्वादका लागि मीठो पार्नेछौं।
तपाईं यो दालचीनी संग स्वाद गर्न सक्नुहुन्छ, यो नुस्खामा जस्तै, भनिला वा सुन्तलाको बोक्रा सहित, सधैं फ्ल्याक्सको साथ पहिलो चरणमा तिनीहरूलाई क्रश गर्नुहोस्।
थप जानकारी - टाइगर नट मिल्क हिला
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: पेय पदार्थ र जुस, ल्याक्टोज असहिष्णु, १ 15 मिनेट भन्दा कम, भेगन, शाकाहारी
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » थर्मोमिक्स रेसिपीहरू » पेय पदार्थ र जुस » ओट दुध
फ्रिजमा कति दिन यो रहन सक्छ?
नमस्ते Gespy। घर बनाएको दुध, संरक्षकको अभाव, लामो समय सम्म रहँदैन। फ्रिजमा र बन्द कन्टेनरमा, करीव days दिन।
मैले भर्खरै यो गरें, यो धेरै राम्रो छ। म अर्को ब्याच बनाउन जाँदैछु र लिटर लिने केहि साथीहरु लाई लिन्छु जो कफिको लागि यो दूध प्रयोग गर्छन्। नुस्खा को लागी धन्यवाद!
कति राम्रो लिस्! तपाईको सन्देशको लागि तपाईलाई धेरै धन्यबाद, हामी तपाईलाई खुसी लागी खुसी छौं। तिमि साथीहरु कती भाग्यमानी छौ? 🙂
बाँकी ओट्स र मैदान दालचिनीको फाइदा लिन हामी के गर्न सक्दछौं? त्यहाँ कुकिज, केक, मा यसको फाइदा लिने कुरा छ ... तर मलाई कुनै पनी विधि थाहा छैन र म प्रयास गर्ने हिम्मत गर्दिन।
तपाईं आफ्नो अनुहारको लागि एक मास्क बनाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई छालामा केही समयको लागि सुक्नुहोस् र त्यसपछि यसलाई तातो पानी वा गुलाब पानीले हटाउनुहोस्। दलियामा छालाका लागि उत्कृष्ट गुणहरू छन्।
नमस्कार, तपाईं जट किन्नुहुन्छ।
नमस्ते रोजा ओट फ्लेक्स सुपरमार्केटमा पहिले नै बेचिन्छ, आफ्नो सामान्य सुपरमार्केट मा सोध्नुहोस्। यदि होईन भने कुनै पनि हाइपरमार्केटमा। र यदि तपाईंसँग पहुँच छैन भने, तपाईं यो कुनै पनि जडिबुटी, जैविक सुपरमार्केट वा स्वास्थ्य खाद्य स्टोरहरूमा सुरक्षित पाउनुहुनेछ। तपाईको अनुसन्धान को लागी शुभकामना!
नमस्ते! मैले पनि बनाएको छु, तर सस प्यानमा तताउँदा यो धेरै गाढा हुन्छ, बनावट कपको लागि लगभग चकलेट जस्तै छ र यो यस्तो पिउन एकदम अप्रिय छ ... यो हुनबाट रोक्न कुनै चाल? मैले सुपरमार्केटहरूमा किनेको ओट मिल्कले मलाई कहिल्यै गाढा गरेको छैन, अर्कोतर्फ, जब म दलिया बनाउँछु (ब्रेकफास्टको लागि दलियासँग दलिया), यसले धेरै गाढा हुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद!
अरबेलालाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते अरबेला सत्य यो हो कि मैले यो कहिल्यै तातो भएको थिएन, सँधै चिसो, जस्तै हरचाटामा। तर, के मैले परामर्श गरिरहेको छु, मैले देखेको छु कि प्राकृतिक ओटको दुध साँच्चिकै गाढा हुन्छ यदि तातो छ भने। यसलाई रोक्नको लागि यो उत्तम छ कि तपाईंले यसलाई छोटो समयको लागि र कम तापक्रममा तातो पार्नुभयो, जुन यो कहिल्यै फोडामा नपुग्दा वा १००º को आसपास हुँदैन। यदि तपाईं हलचल गर्नुहोस् जब यो राम्रो राम्रो ताप हुन्छ (यसको लागि, टीएमएक्स शानदार छ किनकि तपाईं केही मिनेटको लागि º०º र चम्चा गति राख्न सक्नुहुन्छ) अर्कोतर्फ, जहाँसम्म मेरो लाग्दछ कि तपाईंले यो गर्नुभयो, यसको साथ यो तान्न आवश्यक छ। धुंध, एक strainer को साथ होईन। आउनुहोस् हेरौं कि कि कसरी यो तपाइँलाई न्यानो पिउन काम गर्दछ। चुम्बन!
नमस्कार, म यस खेलौनाको बारेमा एकदमै इच्छुक छु, एक खेलाडीको रूपमा। मेरो प्रश्न यदि g० ग्रामको सट्टामा हो। के म प्रति लिटर १०० ग्राम लगाउन सक्छु?, र यसैले ओट्सको गुणधर्मको अधिक फाइदा लिन सक्छु। शुभकामना
नमस्कार जोस। पावर, तपाईं सक्नुहुन्छ। तर तपाईं अब जटको दूध, तर ओटमील क्रीम पाउनुहुनेछ, एक चम्मच संग लिन। अंगालो!
गति को लागी धन्यवाद, म g०gr राख्छु। म पिउन रुचाउँछु।
एलीको ब्यूटी ब्लग भन्यो
मैले हिजो यो तयारी गरें र यो धेरै बाक्लो, कपडाले तान्न असम्भव थियो, र एक जिलेटिनस बनावटको साथ। मलाई लाग्छ कि म यसलाई फ्याँकिएको छु ... के पानीलाई तताउन वास्तवमै आवश्यक थियो?
एलीको सौन्दर्य ब्लगलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार द ब्यूटी। यो सामान्य छैन कि तपाइँ यस्तो जस्तो हुनु भएको छ, कदापि होइन। दलियाको मात्रामा त्यहाँ त्रुटि हुनुपर्दछ। थर्मोमिक्स स्केल धेरै नै संवेदनशील हुन्छ र कहिलेकाँहि असफल हुन्छ (यदि यो पूर्ण स्तरमा छैन भने, केबल एकदम कडा छ भने यसले यसले प्रभाव पार्दछ कि यसको खुट्टामुनि रोटीका केही टुक्राटाँठाहरू छन् ... राम्रो छ, यो एकदम नाजुक छ)। लगभग यो अलग तौल गर्न राम्रो छ, वा ढक्कनमा कन्टेनर राख्न, मापन शून्य सेट गर्नुहोस् र कन्टेनर भित्र तौल तोक्न सकिन्छ। यसले यी प्रकारका असफलताहरूलाई वेवास्ता गर्दछ। यो पानी तताउन आवश्यक थियो कि भएन भन्ने सम्बन्धमा, राम्रो, हो, वास्तवमै आवश्यक छ, यदि छैन भने, दुध बनाइएको छैन। अर्को पटक प्रयास गर्नुहोस् र तपाई यो देख्नुहुनेछ कि यो कसरी राम्रो देखिन्छ। मोटोपनको साथ समस्या, जसरी तपाईं अर्को टिप्पणीमा देख्नुहुनेछ, दुध कहिले बनेको हुँदैन, तर एक पटक यसलाई तताएर जब यो बनाइन्छ। तपाईंले बनाउनु भएको एकको बारेमा, यदि तपाईं हिम्मत गर्नुहुन्छ भने, तपाईं यसलाई अनुहारको मास्कको रूपमा लागू गर्न सक्नुहुन्छ, यसमा उत्कृष्ट गुणहरू छन्। अंगालो!
नमस्ते! तपाईंले तरकारी पिउने क्रममा बाँकी रहेको पास्तालाई के गर्ने भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो; यसलाई "ओकारा" भनिन्छ, र यदि तपाइँ अनलाइन खोज्नुहुन्छ भने, तपाइँ व्यंजनहरूको भीड पाउनुहुनेछ: कुकीहरू, तरकारी क्रोकेटहरू ...
माल्टालाई जवाफ दिनुहोस्
मसँग कति भेना र पानी राख्नुपर्दछ कि यसले सुपरमार्केटमा बेच्नेहरू जस्तै फेर्छ? ????
र भन्नुहोस् मैले के यो हर्भुर राख्दैन के हुन्छ ?????
एन्कर्णीलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार एनकारनी। तपाईलाई दिने नुस्खा सुपरमार्केटमा बेचेको भन्दा अलि मोटो छ। तर प्राकृतिक जई दुध जस्तो छ। यदि तपाईं यसलाई स्पष्ट बनाउन चाहनुहुन्छ, एकपटक बनेको, भने तपाईं पानी थप्नुहोस् र हलचल गर्नुहोस्। तर पहिले यो जस्तै प्रयास गर्नुहोस्, यो धेरै स्वादिष्ट छ र यसलाई स्पष्ट पार्नु शर्मको कुरा हो।
उमाल्ने सम्बन्धमा, म तपाईंको प्रश्न बुझ्दिन। विधिमा, कुनै पनि समयमा यो उमालेको हुँदैन। फाई द्वारा, टिप्पणी पठाउनु भन्दा अलि अलि धेरै समीक्षा गर्नुहोस् जुन तपाईंले मलाई अन्तिम वाक्य, चुम्बन, सुन्दरसँग बौलाहा बनाउनुभएको छ।
नमस्कार राम्रो! नुस्खा को लागी धन्यवाद! म यसलाई दैनिक प्रयोग गर्दछु! एक सानो कुरा ... दुई लिटर समय बनाउन सम्मान गर्न?
यो धेरै सरल छ तपाईंले मात्र चरणमा समय बढाउनुपर्नेछ। पानीलाई º०º मा तताउनुहोस्, म विश्वास गर्दछु कि १० मिनेटको साथ यो पहिले नै तापक्रममा पुगेको छ। यदि होईन भने, केहि मिनेट को लागी समात्नुहोस्।
बाँकी सबै उस्तै।
इरिना सान्ज भन्यो
नमस्कार! मलाई यो पेय मनपर्‍यो, मैले भर्खरै यो बनाएँ ... मैले थोरै भनिला र स्टेभिया पनि थपे ... यो उत्कृष्ट छ र पिउँदा हामी जाँदा ...?
इरिना सान्जलाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई खुशी छ कि तपाईले यो मनपराउनु भयो।
याद गर्नुहोस् कि ओट्सबाट ओकराको साथ तपाईं कुकीहरू बनाउन सक्नुहुन्छ वा अन्य रेसिपीहरू समृद्ध गर्न सक्नुहुन्छ।
नमस्कार मामला मा यो तपाइँको सेवा गर्दछ। म यसलाई रातो रात ओटीमिललाई पानी, कागतीको बोक्रा र दालचिनी (आरामले छोपेर) छोडिदिन्छु। म बिहान स्ट्रेनरको माध्यमबाट तान्छु, पहिलो पानी खन्याएर। मैले गिलासमा पास्ता थोरै नुन, भनिला र एक चम्मच सूर्यफूल तेल (वैकल्पिक खैरो चिनी) संग २ मिनेटको लागि गतीमा राख्छु र त्यसपछि म चिसो पानीको लिटर थप्दछु र यसलाई १ मिनेटको वेगमा राख्छु। यो कपडा कफी फिल्टरको साथ र फ्रिजमा राख्नुहोस्।
ब्लांका रुईज भन्यो
यस दूधमा क्याल्सियम कसरी ल्याउने
ब्लांका रुजलाई जवाफ दिनुहोस्
सत्य यो हो कि मलाई थाहा छैन। तपाईं आफ्नो खानामा अन्य खाद्य पदार्थहरूको साथ क्याल्सियम सेवन पूरक गर्न सक्नुहुन्छ वा फार्मेसीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ यदि उनीहरूले तरल क्याल्सियम पूरक बेच्छन् (वर्षौं अघि उनीहरूले बोतलहरूमा बेचे)
नमस्कार, म आज यसलाई बनाउन प्रयास गर्दैछु, तर म केहि सोध्न चाहान्छु कि म यसलाई लुकाउन को चरण छोड्न सक्छु? किनकी म सामान्य रूपमा दूधमा रोल गरिएको जई थप गर्दछु, यस अवस्थामा यो लामो समयसम्म आवश्यक पर्दैन, हैन? र यसैले म सबै चीजको फाइदा लिन्छु। धन्यवाद।
तपाईंले भन्नुभए जस्तो गरी कोसिस गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् कि यो तपाईंलाई कस्तो लाग्छ। यदि तपाईं पछि दलिया संग जाँदै हुनुहुन्छ भने, दुधको साथ, तपाईंले यसलाई तनाव नराख्नु राम्रो हुनेछ।
मैले यो पहिले नै बनाइसकेको छु, मैले यसलाई हिजो नै बनाएको छु र मलाई यो मनपर्‍यो, मैले आफैंलाई एक ताजा केरा चिल्लो बनाएँ, मैले सुन्तलाको बोक्रा बनाएँ। धन्यवाद।
ठीक छ, मैले भर्खरै यो बनाएको छु र म यसलाई फ्रिजमा राख्ने गर्छु यो शीतल हुनको लागि, मैले यसलाई अझै न्यानो पार्नु अघि प्रयास गरिसकें र यो एकदम स्वादिष्ट छ !!!!! मलाई लाग्छ कि यो स्नाक्सको राम्रो विकल्प हुनेछ कि म पहिले नै यति धेरै कफी र चियाबाट थकित छु, केहि स्वस्थ र ताजा!
कस्तो खुशी क्रिस्टिना !! हामी धेरै खुसी छौं, हामीलाई लेख्न को लागी धन्यवाद !! 🙂
तपाईले बनाएको यो नुस्खाका लागि धेरै धन्यबाद र तपाई के भन्नुहुन्छ तर दालचीनी बिना र यो धेरै राम्रो छ।
म एक हप्ताको लागि ओट दुधका लागि सबै रेसिपीहरू प्रयोग गर्दैछु र ती मध्ये कसैले पनि मलाई विश्वास गर्दैनन्, मैले तपाईंको पत्रमा अनुसरण गरेको छु र मलाई दुई चीजहरू हुन्छन्। पहिलो कुरा यो हो कि जब म दलिया र दालचिनी फ्लेक्सलाई चरण crush मा कुचोल्छु, मसँग पाउडर, दलिया छ जसले मलाई पहिले नै तनाव असम्भव हुने थियो भन्ने शंका गर्‍यो। अन्तत: एक तह कपडामा रहन्छ जुन तरल पदार्थलाई भित्र जान नदिनुहोस्, र यसलाई हटाउन को लागी निराश पार्नु हुन्छ, यो मेरो लागि बनेको हो र अन्तमा सबै कुच्यो र यसलाई पिउँछ, वा यसलाई खाँदछु, मँ मलाई थाहा छैन ...
दोस्रो कुरा यो हो कि यो एकदम पातलो छ, दुधको बनावट होइन तर जिलेटिनस हो, मलाई थाहा छ कि यो जईको म्यूकेलेज हो, तर पातलो हुँदैन यदि मैले अधिक पानी थपे पनि, यो फोहोर पानी जस्तो छ घना बलगमको साथ मध्य के यो वास्तवमै यस्तो देखिन्छ र तपाईं यसलाई पिउन सक्नुहुन्छ? मलाई लाग्छ कि म ओट दुधमा तौलियामा फ्याँक्छु ... यदि तपाईसँग केही सल्लाह छ भने म यसको कदर गर्छु
मेडियालाई जवाफ दिनुहोस्
मेडिया, म तरकारी दुधहरू बनाउने बानी हुँ। त्यसोभए यसले तपाईलाई बाक्लो बनाउँदैन, पहिले जईलाई पानीमा भिजाउनुहोस्, कम्तिमा २० मिनेट वा रातमा। त्यसोभए तपाईं दलियालाई तन्काउनुहुन्छ र धाराको मुनिको रूपमा तपाईंले यसलाई स्ट्रेनरमा ध्याउनुहुन्छ सकेसम्म धेरै म्यूकेलाज हटाउनका लागि। त्यसपछि जटलाई पानी, दालचिनी, आदि बाट हराउनुहोस्। चिसो पानी संग। माथि एक महीना तान्न र चीजकलोथको साथ तनाव र यो बाक्लो हुने छैन। समयको पानीले र ताप नलिकन पिट्नु राम्रो हुन्छ, किनकि तापक्रममा निर्भर गर्दै यो गाढा हुन्छ वा हुँदैन। यदि तपाईंले थोरै दलिया राख्नुभयो भने, यो तातो हुँदा कम मोटो हुन्छ। जईको दुध धेरै थोरै व्यञ्जनहरूमा तताउन सकिन्छ, ओट्सको प्रतिशतको आधारमा। तातो पिउन, बदामको दुध बनाउन राम्रो प्रयास गर्नुहोस्। शुभकामना
@Irenegonser लाई जवाफ दिनुहोस्
यो नुस्खा धेरै राम्रो छ, म यसलाई केही समयको लागि बनाउँदैछु र मैले चिनी थप्दिन किनकि म दालचिनी र कागतीको बोक्रा थप्दछु। यो धेरै राम्रो छ !!!!
यो रेसिपी आफै चिनीमुक्त छ तर हामी तपाइँको दालचीनी र निम्बूको स्वादको मिश्रण मनपर्दछ।
भिन्न टचको लागि सुन्तला पनि प्रयास गर्नुहोस्।
थर्मोमिक्समा फ्राइड बदाम
स्पेगेटी एग्लियो, ओलिओ र पेपरमिन्ट